Xanaanada Caruurta Marka Aad Ka Baxdo Barnaamijka MFIP) | LawHelp Minnesota
Xanaanada Caruurta Marka Aad Ka Baxdo Barnaamijka MFIP)
Maxay tahay xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka?
Xanaanada Caruurta ee Sannadka kala guurka waa gargaarka xanaanaynta caruurta ee lagu siiyo 12ka bilood kadib marka aad ka baxdo barnaamijka MFIP. Waad heli kartaa haddii.
Hadii aad qaadatay MFIP ama DWP ugu yaraan hal bil ee lixdii bilood ee la soo dhaafay iyo
Waxaad shaqaysaa 20 saacadood ama ka badan todobaadkii, waxaadna qaadataa mushahaarka ugu yar. Ama waxad tahay shaqa doon. Qoyska ka kooban laba waalid, labada waalidba mid walba waa in uu shaqeeyaa celcelis 20 saacadood tadobaadkiina.
Sidee u heli karaa xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka?
Hadii aad hadda qaadatid gargaarka xanaanada caruurta. wac shaqaalaha xanaanada caruurta una sheeg in aada rabto in lagu siiyo Xanaanada Caruurta Sanadka kala guurka ah markaad ka baxdid MFIP.
Haddii aadan hadda qaadan gargaarka xanaanada caruurta, weydii shaqaalaha maaliyadda ama la taliyaha shaqaalaynta in uu kuu codsado.
Ma aha in aad isku filaatay markaad ka baxday MFIP, si aad u hesho xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka ah. Waad heli kartaa xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka ah, saba kasta oo aad uga baxdo MFIP oo aan ka ahayn in laga saaray ama aad been abuur/khiyaano samaysay.
Ma heli karaa xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka ah annigoo dugsi dhiganaya?
Haa. Waa lagu siinayaa xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka ah haddii aad dhiganayso dugsi la aqoonsanyahay, ama aad tababar ku jirto. Tan waxaa ka mid ah fasalada GED, ESL, ama waxbarasho kuliyad. Waxaad heli kartaa gargaarka xanaanada caruurta saacadaha aad fasalka ku jirto, aad waddo shaqa ku tababarasho, ama waxbarasho madax banaan, ama aad dugsiga ku sii socotid ama ka soo soctid. Aradayda dhigata waxbarashada dugsiga sare wixii ka sareeya, waxay heli karaan gargaarks xanaanada caruurta waqtiga ay wax baranayaan.
Ma heli karaa xanaanada caruuta inta aan shaqo raadinayo?
Haa. Xanaanada Caruurta ee sannadka kala gurrka ah waxay ku siinaysaa xanaanada caruurta inta aad shaqada raadinayso – haddii aad u sheegto shaqaalaha qaabilsan xanaanada caruurta in aad shaqo raadinaysid. Waxaa jira waqti xadidan oo laguu ogolyahay inta aad heli kartid intaad shaqa doonka tahay.
Waa imisa qimaha xanaanada caruurta ee sannadka kala guurka?
Xanaanada Caruurta ee sannadka kala guurka waa xisaab is dhimaysa oo ku xirran dakhliga qoyska. Xisaabtaas is dhimaysa waxay la mid tahay sida ay isu dhimayso xanaanada caruurta ee barnaamijka MFIP. Haddii aad ilmaha gaysid meel lagu xanaaneeyo oo qaadata lacag ka badan inta ugu badan ee MFIP gobolku ay bixiso, farqiga addiga ayaa bixinaya. kharajku ma siyaadayo markaad ka baxdo xanaanada caruurta ee MFIP oo aad ku biirto Xanaanada Caruurta ee sannadka kala guurka.
Maxay muhiim u tahay in aad hesho Xanaanada Caruurta ee sannadka kala guurka ah?
Qoysaka ku jira Xanaanada Caruurta ee Sannadka kala guurka ah waxay heli karaan kororsiimo haddii lagu daro liiska sugayaasha barnaamijka qiimaha asaasiga ah (sicirka jaban) ee caruurta lagu xanaaneeyo, marka sannadkooda kala guurku dhamaado.
Haddii aadan ku jirin Xanaanada Caruurta ee sannadka kala guurka ah waxaa lagugu dari karaa liiska sugayaasha si aad u hesho barnaamijka caruurta lagu xanaaneeyo ee qiimaha asaasiga ah (qiimaha jaban).
Qiimaha asaasiga ah wuxuu caawimaa qoysaaska dakhligoodu yaryahay oo aan ku jirin barnaamijka MFIP. Inta ay bixinayaan waxay ku xirantahay dakhliga qoyska – si la mid ah dadka ku jira xanaanada caruurta ee sanadka kala guurka iyo Xanaanada caruurta ee MFIP.
Weli ma la iiga baahan yahay in aan uga warbixiyo shaqaalaha degmada wixii isbedel ah ee igu yimaada?
Qoysasku waa in ay saxaan wixii qalad ah ee la xiriira gargaarka xanaanada caruurta 12kii biloodba hal mar. Laakiin waxa jira waxyaabo la rabo in laga soo warbixiyo marka ay dhacaan. Ha la sugin warbixinta sanad laha ah wixii saxitaan ah:
Waxaad haysata 10 maalmood in aad ka soo warbixisid waxyaabahaan:
Cinwaankaaga ama degaankaaga
Xubnaha qoyska – haddii qof ka tegay, ama qof cusub ku soo biiray
Haynta Ilmaha ama jadwalka booqashada
Muwaadin nimada ama sharciga waddanka aad ku joogto
Xaaladda Qoyska – sida wax is guursaday ama is furay, ama ilmo la dhalay
Ilmaha oo dugsiga laga bedelay
Cidda xanaanaysa ilmaha
Cidda xanaanaysa ilmaha waa in la soo sheegaa 15 ka hor isbeddelka.
Waxaa kaloo jira sharciyo la xiriira ka warbixinta dakhliga, ama shaqada, ama jadwalka dugsiga.
Dakhliga: qoysasku waa in ay ka soo warbixiyaan kororka dakhligooda ee gaarsiisan 85% wax ka badan dakhliga celceliska gobolka (SMI). Tirsia waxay ku xirantahay tirade qoyska. Waxaadka heli kartaa current chart (Jaantuska) ee www.dhs.state.mn.us.
Guji “How do I (Sidee ayaan u sameeyaa)” sanduuq
Hoos “Find” guji “edocs and forms (foomamka iyo edocs)”
Geli 6413I sanduuq baarista
Guji halka warqad rasmi ah
Ma aha in aad ka warbixiso isbedel kale oo dakhligaaga ku saabsan. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad rabtid in aad ka war bixiso haddii dakhligaagu hoos u dhaco waxaa hoos u dhici kara garagaarka xanaanada caruurta ee la bixiyo.
Jawdalka shaqada iyo dugsiga: waa in aad soo sheegtaa haddii qof kasta oo qoyska ka mid ah uu si joogta ah u joojiyo shaqada ama dugsiga. Isbeddelada kale oo dhan ee ah jadwalka shaqada ama dugsiga waxaa ka soo warbixinaya:
Qoysaska la siiyo gargaarka xanaanada caruurta wax ka badan hal xanaano bixiye ilmihiiba.
Qoysaska waalidkood u shaqeeyo xarun ay ogolaansho siisay DHS oo caruurta lagu xanaaneeyo ama xanaana bixiye ay qoratay Medicaid oo xanaaneeyo dadka khtaq siyaado ah leh.
Qoysaska ka hela Gargaar Xanaano Caruur meel sharci ah oo aan shati (ogolaansho) haysan, sida qof qoyska ka mid ah ama saaxiib la ah.
qoysaska kale, way ka soo warbixin karaan haddii saacadaha ay shaqeeyaan ama dugsi aadan ay kororto, taasi waxay keenaysaa in ay kororto saacadaha loo ogolyahay Gargaarka Xanaanada Caruurta.
Maxay tahay gargaarada kale ee aan heli karo kadib marka aan ka baxo MFIP?
Waxaa kaloo aad heli kartaa:
Gargaar Caafimaad (MA) oo ku xiran dakhligaaga.
Gargaar Cunto, oo ku xiran dakhligaaga.
Haddii dhib ku qabsado ka dib marka aad ka baxday MFIP, waxaa laga yaabaa in aad hesho Gargaar Deg-deg ah.
Xagee kaloo ka heli karaa xanaanada caruurta?
Minnesota waxay leedahay kayd ciwaanada hay’adaha xanaanada caruurta iyo Shabaqadda isu Dirka meel kasta oo ka mid ah gobolka. Waxaad ka heli kartaa codsiga dhaqaalaha xanaanada caruurta, liiska meelaha caruurta lagu xanaaneeyo, iyo caawimaad kale, wac Khadka macluumaadka 1(888) 291-9811.